सिन्धुपाल्चोक : बलेफी गाउँपालिका, बाह्रविसे नगरपालिका र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको सिमानामा २०७१ साउन १७ गते भिषण पहिरो गयो। पहिरोमा ठूलो मात्रामा मानविय र भौतिक क्षति हुन पुग्यो। जुन पहिरो गएको पाँच बर्ष पुरा भयो। तर, पीडितको अवस्था टहराबाट परिर्वतन ...
थला परेको खिलप्रसादको जिन्दगी : बाँच्‍ने रहर छ, कसले गर्ला सहयोग?
| साउन १४, २०७६
सिन्धुपाल्चोक : भूकम्पले भत्किएको घरको भग्नावशेष। छेवैमा सानो छाप्रो। छाप्रोको एकापट्टी चुल्हो र केही भाँडाकुडा। तर, लामो समयदेखि चुल्होमा आगो बल्न सकेको छैन। चुल्हो छेउमा ओछ्यान। त्यही ओछ्यानमा महिनौँदेखि लडिरहेका छन्, सिन्धुपाल्चोक बलेफी गगाउँपालिका–६ का खि...
मेलम्ची आयोजना : ‘बिजनेश पोलिसी’ या ‘कमिसन’को खेल?
सिन्धुपाल्चोक : बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको यतिबेला विभिन्न अवरोधहरु सिर्जित भइरहेका छन्। इटालियन निर्माण कम्पनीले काम छोडेर हिँडेपछि मेलम्ची आयोजनाको काम भद्रगोल अवस्थामा पुगेको छ। सरकारले मेलम्चीको पानी संघीय राजधानी ल्याउन पटकपटक मिति तय गर्‍यो। पछि...
सडकको लगानी बालुवामा पानी
सिन्धुपाल्चोक : वर्षाको समय सुरु भएपछि कच्ची सडकमा बग्रेली समस्या हुन थाल्छ। पानी परेपछि सडकको बीचबीच भागमै पानीको पोखरी जस्तो देखिनु सामान्यजस्तै भइसक्यो। जुन परम्परागत प्रचलनको जस्तै भइसक्यो। घाम लागे धुलो, पानी परे हिलो जुन समस्याले आजित छन् सर्वसाधारण। तर, सडकमा ...
७० हजार भूकम्पपीडित नयाँ घरमा
सिन्धुपाल्चोक : विनाशकारी भूकम्प गएको चार वर्ष पुग्यो। भूकम्पले निमेशमै ढालेको सिन्धुपाल्चोक विस्तारै लयमा फर्कदैछ। पछिल्लो समयमा सिन्धुपाल्चोकको पुनर्निर्माणले गति लिएको छ। भूकम्पबाट घरबार विहीन हुन पुगेकामध्ये ७० हजार १ सय ८७ परिवारले नयाँ घरमा बसाइ सरिसकेका छ। २०...
सिन्धुपाल्चोक : स्थानीय तहको निर्वाचन भएको दुई वर्ष बित्यो। गाउँमा स्थानीय जनप्रतिनिधि आएका छन्। गाउँमा जनप्रनितिधि आएपछि जनताले केही विकासको मूल फुट्ने अपेक्षा राखे। केही स्थानीय तहले विकासको दिशा लिए। तर, केही स्थानीय तहले पार्टीगत रूपमा बजेट विनियोजन गरे...
सिन्धुपाल्चोक : सिन्धुपाल्चोकको मिसाक्षेत्रमा निरन्तर रुपमा बाढी पहिरोको प्रलय भइरहेको छ। बर्सेनि भोटेकोशी बाढीले करोडौँको क्षति हुने गरेको छ। यसवर्ष पनि २१ असार शनिबार रातिको अविरल वर्षाको कारणले दुई जनाको ज्यान गएको छ। भने करोडौँको क्षति हुन पुगेको छ। शृंखलाबद्ध...
स्थानीय तहको बजेट : ‘नयाँ भिजन’ कम ‘परम्परागत’लाई प्राथामिकता
सिन्धुपपाल्चोक : सिन्धुपाल्चोकका १२ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याए। केहि स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याए। अधिकांश स्थानीय तहले नीति र कार्यक्रममात्रै सार्वजनिक गरेका छन्। सबै पालिकाको नीति र कार्यक्रमलाई अध्ययन गर्दा धेरै ठूला र महत्वकांक्षी...
संरक्षणको पर्खाइमा पानीविनाको रानीपोखरी
सिन्धुपाल्चोक : चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका ८ मा अवस्थित छ ऐतिहासिक रानीपोखरी । नगरपालिकाको पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्न रानीपोखरीले महत्त्व छ। धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्त्वको यो स्थल संरक्षणको पर्खाइमा छ। रानीपोखरी संरक्षण र प...
पत्याउनु हुन्छ? व्यवसाय गर्न १ प्रतिशत ब्याजमै ऋण!
सिन्धुपाल्चोक : तपाईंलाई झट्न सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ। सामान्यत ऋणको ब्याज सहकारी वा बैंकतिर भए कम्तिमा १० देखि १४ प्रतिशत हुन्छ। व्यक्तिगत भए २४/३६ प्रतिशतसम्म ऋणको ब्याजदर हुन्छ। तर, सिन्धुपाल्चोक लिसंखुपाखर गाउँपालिकामा एक प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिन सकिन्छ। जुन कुरा यथार्थ...
सिन्धुपाल्चोक : खेलक्षेत्रको उदाउँदो नक्षत्रको रूपमा अग्रणी नाम हो प्रेम भण्डारी। बलेफी गाउँपालिका–३ मा वि.सं. २०३१ सालमा दिर्गकुमारी र डम्बरबहादुर भण्डारीबाट उनको जन्म भयो। सामान्य परिवारमा जन्मेका भण्डारीको खेल क्षेत्रमा सानै उमेरदेखि रुचि थियो। उनी...
गेलुङ्खोला हाइड्रोपावरको ज्यादती, मुआब्जाबिनै थाल्यो काम
सिन्धुपाल्चोक : सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन गेलुङखोला हाइड्रोपावरले मनपरी रूपमा आफूखुसी काम गर्दै आएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। जुगल गाउँपालिका हुँदै चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका ४ कुविण्डेमा बन्न लागेको सवस्टेसन निर्माणमा मनलाग्दी गरेको हो। पद...
तातोपानी नाकामा चार वर्षपछि फर्कियो खुसी
सिन्धुपाल्चोक : २०७२ को विनाशकारी भुकम्पपछि बन्द तातोपानी नाका बुधबारबाट खुल्यो । लामो प्रयासपछि तातोपानी नाका सञ्चालनमा आएको हो। नाका सञ्चालन भएपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध थप मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ। उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री मातृका यादव, चीनको भन्सारका उपमन्...
खुल्दै तातोपानी नाका : सामान लिन खासा पुगे चारवटा कन्टेनर
सिन्धुपाल्चोक : विनाशकारी भूकम्पपछि बन्द तातोपानी नाका चार वर्षपछि खुल्ने भएको छ । नाका औपचारिकरुपमा भोली (बुधबार) बाट सञ्चालन ल्याइने तयारी भइरहेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रृका यादवले नाकाको उद्घाटन गर्ने भएका छन् । नाकामा सामान लिन ४ वटा कन्टेनर ख...
सिन्धुपाल्चोक : बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम ठप्प छ। आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको मुख्य ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले काम छोडेपछि आयोजनाको काम ठप्प भएको हो। तर, सरकारले एक वर्षभित्र काठमाडौंवासीलाई मेलम्चीको पानी खुवाउने बाचा गरेको छ। सरकारको यसअघि...
कांग्रेसको जनजागरण : सभास्थलमै कुटाकुट, अर्को गुटको कार्यक्रममा जान निषेध
सिन्धुपाल्चोक : नेपाली कांग्रेसको देशव्यापी जागरण अभियान सुरु भएको छ। अभियान सफल पार्न कांग्रेसका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म गाउँ जाने तयारीमा छन्। तर, सिन्धुपाल्चोकमा जागरण अभियान थालेकै दिन दुई गुटको विवाद कुटाकुटसम्म पुगेको छ। सिन्धुपाल्चोक कांग्रेसका सब...
बलेफीमा दुर्घटना : बसमा तोडफोड, सडक अझै अबरुद्ध
सिन्धुपाल्चोक : यहाँको बलेफीमा बसले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनापछि स्थानीयले बससहित चारवटा सवारीमा तोडफोड गरेका छन् । अरनिको राजमार्ग अन्तर्गतको बलेफी-बन्देउ सडकखण्ड अझै खुल्न सकेको छैन। बा ३ ख ९३४ नम्बरको बसले बा ७ त २ प ९०२४ नम्बरक...
यसरी हुँदै छ तातोपानी नाकाको काम (फोटो फिचर)
सिन्धुपाल्चोक : गोरखा भूकम्पपछि बन्द तातोपानी नाका खुलाउन सीमाक्षेत्रमा धमाधम पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ। यही जेठ १७ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने तातोपानी नाकामा काम भइरहेको छ। तर, पुल निर्माण आधा बाँकी रहेकाले यो नाका तोकिएको मितिमा खुल्ने सम्भ...
मनै लोभ्याउने चित्लाङ र मार्खु, फोटो
कुलेखानी : मकवानपुरको थाहा नगरपालिका-४ मा पर्ने चित्लाङ र इन्द्रसरोवर गाउँपालिका-१ पर्ने मार्खु बजारले जो कोहीको मन लोभ्याउँछ। यहाँको हरियाली र मनमोहक दृश्यले सबैको ध्यान खिच्छ। संघीय सरकारको राजधानी काठमाडौँबाट नजिकै रहेकाे पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा पर...